फिल्म हिट भए कलाकार हिट, फिल्म फ्लप भए कलाकार फ्लप हो त ? – Nepal Japan
नेपाली समय : 10:42:12
जापानी समय : 01:57:12
फिल्म हिट भए कलाकार हिट, फिल्म फ्लप भए कलाकार फ्लप हो त ?
24 June, 2019 16:21 | कला/मनोरन्जन | comments | 31950 Views
सामान्यतया हामिले कुनै फिल्म हिट भएपछि कलाकार पनि हिट र फिल्म फ्लप भयो भने कलाकार पनि फ्लप भन्ने बुझ्छौँ तर त्यसो कदापी होईन । यस कुरालाई धेरै नेपाली फिल्मले प्रमाणित गरिसकेका छन् ।
कुरो गरौँ हिट चलचित्र छक्का पञ्जा ३ को । यस फिल्ममा अभिनेत्री दिपिका प्रसाइले लीड क्यारेक्टर भएर काम गरेकी थिइन् । दीपिका प्रसाई यो फिल्ममा अनुवन्धित हुने वित्तिकै अब उनी चल्छिन् भनेर भनिएको थियो । दीपिका प्रसाइले खेलेको यो फिल्म नेपालमा सबैभन्दा धेरै कमाउने फिल्म बनेको छ । छक्का पन्जा ३ को रेकर्ड तोड्न अरु फिल्मलाई धेरै बर्ष लाग्नेछ ।
छक्का पन्जा ३ सर्वाधिक चलेको नेपाली फिल्म हो । यो फिल्म चलेपछि अभिनेत्री दिपिका प्रसाई पनि चल्छिन् भनियो । दिपिकालाई पनि आशा यही नै थियो । तर, छक्का पन्जा ३ को व्यापारले दिपिकालाई कुनै असर गरेन । उनलाई फिल्ममा चल्न धौ धौ छ । उनी, फिल्म हेल्लो जिन्दगी त खेल्दैछिन् । तर, उनलाई छक्का पन्जा चलेपछि जुन खालको अफर आउनुपर्ने हो, त्यो आएको छैन ।
उनी, आफ्नै श्रीमान् दिवाकर भट्टराइको फिल्म पनि गर्दैछिन् । अभिनेत्री अदिती वुढाथोकीको फिल्म कृ लगानी धेरै भएकाले नेपालबाट लगानी उठाउन असमर्थ भयो । तर, कृ सिनेमा चल्ने बेलामा अदिती वुढाथोकीलाई खुबै फाइदा भयो । उनले, पहिलो फिल्मबाट नै पाउनुसम्म चर्चा पाइन् । अदितीलाई नेपाली फिल्ममा साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहपछि चल्ने अभिनेत्री भनिएको थियो । तर, चर्चा पाएको फिल्म खेलेर अदितीलाई फाइदा भएन । उनलाई लिएर फिल्म बनाउन निर्माताको चासो कम छ ।
फिल्म नाई नभन्नु ल ५ बाट नेपाली फिल्ममा आएका अभिनेता थिए, अभिषेक नेपाल । गएको बर्ष यो फिल्म सर्वाधिक चलेको हो । यो फिल्म चलेपछि नयाँ हिरो अभिषेकलाई पनि फाइदा हुन्छ भनेर सोचिएको थियो । तर, यो फिल्म चल्दा अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्कालाई फाइदा भयो । तर, अभिनेता अभिषेकलाई कुनै पनि खालको फाइदा भएन । किनकी, अभिषेकको भूमिकालाई दर्शकले रुचाएनन् ।
सिनेमा लुट चलेर ऋचा शर्मालाई कुनै फाइदा भएन । उनको करिअरमा लुटले जति फाइदा दिनुपर्ने हो त्यो दिन सकेन ।
फिल्म हिट हुँदैमा कलाकारलाई फाइदा हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । कि त त्यो कलाकारले फिल्म नै बोकेर हिट बनाएको हुनुपर्छ । होइन भने हिट फिल्मको कलाकार हुँदैमा फाइदा हुँदैन । किनभने, कतिपय फिल्म नचलेर पनि कलाकारको अभिनयले गर्दा उसलाई फिल्ममा लिनका लागि निर्माताले लोभ गर्छन् ।
फिल्म क्याप्टेन औषत चलेपनि उपासना सिंह ठकुरीले राम्रो ब्यानरको फिल्म पाइन् । उनी कबड्डी ३ मा काम गरिरहेकी छिन् । फिल्म रणवीर नचलेपनि अभिनेत्री सुपुष्पा भट्ट चलेकी छिन् । उनलाई फिल्मको अफर आइरहेको छ । उनले छ माया छपक्कै भन्ने फिल्म यसै पाएकी होइनन् । यसैले फिल्म बम्पर हिट हुने वित्तिकै कलाकारले काम पाइहाल्छन् भन्ने छैन । तर, कलाकारले फिल्ममा राम्रो काम गरेको हुनुपर्छ ।
राम्रो काम गरेका कलाकारको फिल्म नचलेपनि उनीहरु चल्छन् । यसैले, फिल्म हिट हुँदा राम्रो हो । तर, फ्लप हुँदैमा आत्तीहाल्नुपर्ने पनि हुँदैन । मात्र, काम राम्रो गरेको हुनुपर्छ ।